50 Best Oyster Mushroom Ad Images in 2020 - BigSpy
Grow Gourmet Mushrooms at Home – The Mindful Mushroom
Home Grown - Urban Food Growing | Urban Farm-It
Oyster Mushroom Raipur Chhattisgarh
Cactus Hat Mushrooms
Oyster Mushroom Baguio City
Urban Spore Mushroom Farm
GMK Oyster Mushroom FARM
Bongkah Cendawan Tiram / Oyster Mushroom
Would you like to learn Oyster mushroom farming business at the comfort of your home? , here is an opportunity, you can learn it with our practical kit and online training at just at 750/-, Cash on delivery > One to one business-oriented online training > Cultivation to marketing everything is covered > Food licensing training included > Certification included How do I enroll? send in your address and contact number on inbox, that's it. you can pay the course fee (750/-) when our courier partners deliver practical kit at your doorsteps What is there inapractical kit? it has everything that you need to grow oyster mushrooms. growing medium, mushroom spawn (seeds), grow bags, etc when will the classes start? Once the practical kit is delivered, we will start classes same day evening through WhatsApp if you have questions, message or call us or Whatsapp us in 9916658207
Backyard Garden - Cagayan de Oro City
Hulat nalang ka mgtubo ang oyster mushroom. Malingaw nka, makakaon pa imo pamilya og pwede pa pang negosyo package. Lami and healthy. Limited stocks available!
ဒီတခါ Mushroom Kitchen ကနေတင်ဆက်မည့် ဟင်းလျာတွေကတော့ ယခင် နံမည်ကြီး စင်္ကာပူ/ဟောင်ကောင် ဟင်းလျာပုံစံတွေအပြင် ချဉ်ချဉ်/စပ်စပ်/ပူပူ သွားရည်ကျစရာဟင်းအမည်တွေလဲ ထပ်ထည့်ထားပါတယ်... Mushroom Kitchen ရဲ့ပေါ်လစီအရ ၁။ စားမကောင်းတဲ့ဟင်းကို လုံးဝမရောင်းပါဘူး ၂။ အချိုမှုန့်နဲ့ အရသာရှိအောင် မလုပ်ပါဘူး။ ပါဝင်တဲ့ Ingredients တွေရဲ့ သဘာဝ အရသာအပေါ်မှာ အခြေခံပါတယ် ၃။ ကျန်းမာရေးဆိုးကျိုးကို ဖြစ်စေမည့် ပစ္စည်းတွေမသုံးပါဘူး။ ( စားပြီး လည်ပင်းပိတ်၊ အာခေါင်မှာရှတဲ့ဆီအမျိုးအစားတွေမသုံးပါဘူး ) ကဲပြောတာတွေရှည်နေပြီ Menu အသစ်လေးကိုကြည့်လိုက်ရအောင် ☎️09668998080 ❤️ဖုန်းနံပါတ်က > သုညကိုး ခြောက်ခြောက် ရှစ် ကိုကို ချစ်တယ် ချစ်တယ်❤️ > ကြိုက်တယ် > ဂွဒ်တယ် > အရမ်းကောင်း ❤️ > အိမ်ကလူကို ၁၅စက္ကန့်မေ့သွားတယ် ဘာဖြစ်သွားမှန်းမသိလိုက်ဘူး Mushroom Signature Dishes > Singapore Chilli Crab ( ချို၊စပ်၊ချဉ်၊လေး အရသာ ) > Butter Crab ( ထောပတ် ဆားဘဲဥ ) > Black Pepper Crab ( ငရုပ်ကောင်း ) > Steamed Crab ( ဂဏန်းပေါင်း ) with2Signature Dipping Sauce > ကဏန်းချဉ်စပ် > ကဏန်း ယိုးဒယား မာဆလာချက် Price 150g Size x3ကောင် > 10,000 Kyats 150g Size x6ကောင် > 20,000 Kyats 250g Jumbo Size x2ကောင် > 18,500 Kyats 250g Jumbo Size x4ကောင် > 35,000 Kyats Mantao ပေါက်ဆီကြော်5လုံး > 2,000 Kyats > ကဏန်းခွက်ကြော် - ၁ခု 3,500 Kyats > အစာစုံတဲ့ ကြက်/ဝက် ကောက်ညင်းထုပ် ၁ထုပ် - 2,800 Kyats > ရှူးရှဲ ပုဇွန်မီးဖုတ်ကင်သုပ် - 7,500 Kyats > ကျားပုဇွန်ကင် ၅ကောင် - 12,000 Kyats > Shanghai Dynamite Prawns - 10,000 Kyats > ဂုံးခြောက်စပ် - 6,000 Kyats > ငါးရှဉ့်ခြောက်စပ် - 6,000 Kyats > ကင်းမွန်ခြောက်စပ် - 6,500 Kyats > ဂုံးချဉ်စပ် - 6,500 Kyats > ဂဏန်းသားလုံးကြွပ်ကြော် 20 pieces - 12,000 Kyats > ငါးကြွပ်ကြော် Oyster Sauce - 9,000 Kyats > တုံယမ်းဟင်းရည် ၂ယောက်စာ - 8,000 Kyats > ဝက်ဂုတ်သားကင်သုပ် - 6,000 Kyats > ကြက်ကုန်းဘောင်ရဲ့အဖိုး ကောင်းပိုကြက်သား - 7,500 Kyats > ကြက်ကချင်ချက် - 6,000 Kyats > ဘာကူတေး နံရိုးဟင်းရည် ၂ယောက်စာ - 15,000 Kyats > ရှယ်ဝက်ခေါက်ကင် 200g with Hoisin & Green Chilli Sauce ( Imported Meat ) - 8,000 Kyats ၁ရက် 26 ပွဲရပါမယ် > စီချွမ်ကြက်သား ငရုပ်ခြောက်ကြော် Sichuan Spicy Chicken - 8,000 Kyats > ကင်းမွန်သင်္ဘောသီးထောင်း - 6,000 Kyats > ပုဇွန်ကင် သင်္ဘောသီးထောင်း - 6,500 Kyats > ဖူးကတ် ကင်းမွန် + ပုဇွန် ငါးပိသုပ် - 8,000 Kyats > ဝက်ခေါက်ကင် သရက်သီးသုပ် - 8,000 Kyats > ရေဘဝဲကင် သဘောင်္သီးထောင်း - 6,000 Kyats > ဝက်သားတုတ်ထိုး ပွဲသေး - 10,000/ကြီး 18,000 Kyats > Kimchi 1 ဗူး - 4,000 Kyats Sushi Series Nigiri Series (အတင်) Ebi Sushi 2pcs > 2,000 ပုဇွန်တင် Tamago Sushi 2pcs > 1,500 ကြက်ဥတင် ❤️PorkBellySushi 2pcs > 3,000 သုံးထပ်သားမီးမြှိုက်တင် Salmon Sushi 2pcs > 2,000 ဆယ်လမွန်ငါးတင် Tuna Sushi 2pcs > 2,500 တူနာငါးတင် ❤️Aburi Salmon Sushi 2pcs > 2,500 ဆယ်လမွန်မီးမြှိုက်တင် ❤️Aburi Tuna Sushi 2pcs > 3,000 တူနာငါး မီးမြှိုက်တင် . Gunkun Series (ရေညှိဘေးပတ်) Wakame Sushi 2pcs > 1,500 ရေညှိဆူရှီ Ebiko Sushi 2pcs > 1,500 ပုဇွန်ဥ ဆူရှီ Kani Salad Sushi 4pcs > 1,500 ဂဏန်းချောင်း မရောနစ်ဆူရှီ Tuna Salad Sushi 4pcs > 1,500 တူနာ မရောနစ် ဆူရှီ ❤️Inari Wakame Sushi 2pcs > 2,500 ရေညှိပဲပြားအချိုလိပ် ❤️Inari Sushi 2pcs > 2,500 ပဲပြားအချိုလိပ် . Maki Series (အလိပ်) Cucumber Maki > 2,000 ဂျပန်သခွားသီးလိပ် California Maki > 3,500 ကယ်လီဖိုးနီးယား ဆူရှီလိပ် Ebi Tempura Maki > 2,500 ပုဇွန်ကြော်လိပ် Kani Tempura Maki > 2,500 ဂဏန်းချောင်းကြော်လိပ် Kani Salad Ebiko Maki > 3,500 ဂဏန်းချောင်း မရောနစ် ပုဇွန်ဥလိပ် Dragon Roll > 6,500 ပုဇွန်ကြော် ထောပတ်သီးလိပ် Special Unagi Roll > 8,000 ငါးရှဉ်းကျပ်တိုက် ထမင်းလိပ် Tuna Maki > 4,000 တူနာထမင်းလိပ် . Hot Series Ebi Tempura > 4,500 ပုဇွန်မှုန့်နှစ်ကပ်ကြော် Yaki Aoba > 4,500 ဂျပန်ခါက်ဆွဲကြော် Kisen Fried Rice > 3,500 ဂျပန်ပုဇွန်ထမင်းကြော် Supishina ika no agwmono > 3,200 ကင်းမွန်အစပ်ကြော် Tsurai Tako Itame > 3,200 ရေဘဝဲအစပ်ကြော် Pork Gyoza > 2,500 ဝက်သား ဂျပန်ဖက်ထုပ်ကြော် SoftShell Crab 2pcs > 6,000 ဂဏန်းပျော့ကြော် Tamago 4pcs > 1,500 ကြက်ဥပေါင်း Momo Karage 6pcs > 4,000 ဂျပန်ကြက်တုံးကြော် FrozenSeries ( ReadyMade ) > နိုင်လွန်ပုဇွန် ၁ထုပ် ၂၄ခုပါ - 8,500 Kyats > ဝက်သားပေါက်ဆီအလုံးသေး ၁ထုပ် ၁၅လုံးပါ - 8,500 Kyats >
The Stacks Food Production Company
Now Delivering Nationwide! Our Grey Oyster Mushroom Hobby Kits, order your kit today and grow your own Grey Oyster mushrooms in the comfort of your home! R 136.85 + Delivery (Based on where you are located). Inbox us to order or just click on the WhatsApp Button to contact us directly!
50 Best Oriental Rugs Ad Images in 2020 - BigSpy
50 Best Ontario Ad Images in 2020 - BigSpy
50 Best Oscar Movies Ad Images in 2020 - BigSpy
50 Best Online Medicine Purchase Ad Images in 2020 - BigSpy
50 Best Order Food Online Ad Images in 2020 - BigSpy
50 Best Orro Ad Images in 2020 - BigSpy